Credit: Evan Blass (Inzwi)
Kwidziridzo, Kukadzi 24, 2021 (11:43 AM ET): Isu tangobva kuvandudza iyi Oppo Tsvaga X3 Pro uye Tsvaga X3 akateedzana runyerekupe hub neruzivo rutsva maererano nemitengo inofungidzirwa. Kune zvekare runyerekupe rutsva rwakanangana nezuva rekuburitsa, maficha, uye akasiyana magadziriso mumutsara. Verenga pamusoro kuti uwane zvimwe!
Chinyorwa chekutanga: Muna 2020, Oppo Tsvaga X2 Pro yakave imwe yemafoni edu epamoyo egore. Oppo yakasarudzika inotora pamureza foni dhizaini inoisa parutivi neboka revanhu. Zvichakadaro, mhando yemhando yepamusoro yekamera yakatifadza, uye kunyangwe Ruvara OS iri kuumbika zvishoma nezvishoma kuita ganda rinoshamisa reAroid. Iye zvino, muna 2021, maziso ese ari paOppo Tsvaga X3 Pro.
Related: Oppo Tsvaga X2 Pro ongororo: Inokurumidza, ine fashoni, uye inonakidza
Pamusoro pekutevera kwakanangana kweKutsvaga X2 Pro, isu tinotarisirawo mamwe mafoni maviri kumhara mune Tsvaga X3 dzakateedzana. Isu tapfupisa zvese zvatinoziva kusvika parizvino muguhu hubvu pazasi.
Ive neshuwa yekumaka peji rino sezvo isu tichizori gadziridza chero nguva nyowani Oppo Tsvaga X3 Pro ruzivo pamusoro!
Oppo Tsvaga X3 dzakateedzana: Zita uye zuva rekuburitsa
MunaNovember gore rapfuura, Oppo akasimbisa izvo isu tese taitarisira: iyo yekutevera kune Tsvaga X2 akateedzana ichave Tsvaga X3 akateedzana. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kutarisira kuti Oppo Tsvaga X3 Pro kuve iyo yepamutemo moniker.
Onawo: Zvaunotarisira kubva kune mafoni muna 2021
Sezvineiwo, hazvo, isu hatine chero yekusimbisa kuti kana paizove nevanilla Tsvaga X3. Makuhwa anoti panogona kunge paine mamwe mafoni maviri mune Tsvaga X3 akateedzana - asi hapana kana eaya angangosvika seyakajairwa Tsvaga X3. Zvinokwanisika Oppo ane yakajairwa Tsvaga X3 mumabasa, asi izvo hazvisimbisike sezvazviri.
Kana iri zuva rekuburitsa, isu tinongova newindo renguva kusvika zvino: Kurume. Sekureva kwemuteki anovimbika Evan Blass, Oppo anogona kuvhura michina kutanga kwaKurume uye wozoimisikidza kumagumo kweKurume kana kutanga kwaApril kuburitswa. Kune dzimwe runyerekupe nezve chaiyo yekusunungurwa zuva raKurume 11, asi zvinobva kunzvimbo isinganetsi. Zvisinei, kutanga kwekutanga kwaKurume kunoratidzika kunge ndizvo zvatinofanira kutarisira.
Oppo Tsvaga X3 Pro: Dhizaini
Iine Oppo Tsvaga X2 Pro, kambani yakakwenya yakajairwa "girazi sangweji" dhizaini yekupa chimwe chakasiyana. Kumashure kwevamwe Tsvaga X2 Pro mamodheru, iwe unowana yekunyepedzera-ganda kufukidza. Iyo inoteerera kumashure kune ekare mazuva apo iwe waigona kuwana zvakafanana zvinyorwa kumashure kwe Samsung Galaxy Note mafoni.
Nehurombo, runyerekupe kusvika parizvino runoratidza kuti Oppo pamwe haazove achidzosa dehwe kuOppo Tsvaga X3 Pro.
Credit: Evan Blass / Inzwi
Nekudaro, izvo hazvireve kuti Oppo haisi kusanganisira zvimwe zvitsva. Vatengesi vakaburitswa kuburikidza naEvan Blass ratidza foni ine yakasarudzika yekumashure kamera bump iyo inonyatso kuenderana neiyo yekumashure girazi (kana inogona kunge iri plastiki, isu hatina chokwadi parizvino). Kunyangwe isingaite kuti kamera ibhure chero diki, inoipa iyo yakasarudzika uye yakasarudzika kutaridzika.
Kumberi, iwe unogona kutarisira kuti zvinhu zvive zvakangofanana zvakafanana negore rapfuura. Kwekutanga kuvuza kunoratidza 6.7-inch yakakombama kuratidza paneli ine imwechete selfie kamera yakatemwa mukona yepamusoro kuruboshwe.
Pamativi, iwe unowana bhatani remagetsi kurudyi uye vhoriyamu rocker kuruboshwe. Izvo hazvitaridzike sekunge paine headphone jack, asi iyo Tsvaga X2 Pro yakashaiwawo izvo, saka hazvishamise zvikuru.
Oppo Tsvaga X3 Pro: Specs uye maficha
Kunyangwe isu tisina kusimbiswa, isu tine chivimbo chekuti Oppo Tsvaga X3 Pro ichave neiyo Qualcomm Snapdragon 888 processor. Ichi ndicho chimwe cheiyo Oppo yepamusoro-mbiri kuburitswa kwerunhare rwegore, saka isu tinogona kushamisika zvikuru kana ikasaratidza nyika-kirasi silicon.
Kumwe kunhu, isu tinotarisira kuti akawanda emaficha kubva kuTsvaga X2 Pro kuti aendese kune yayo yekutevera. Izvi zvinoreva kuti 120Hz inoratidza mwero wekuzorodza, 1440p kuratidza, uye 65W wired kuchaja. Kusiyana negore rapfuura zvakadaro, pane runyerekupe runotsigira iyo pfungwa yekuti Oppo's VOOC Air inokurumidza isina waya kuchaja kunogona kuuya neKutsvaga X3 Pro. Icho chinhu chikuru, sezvo kushomeka kwechaji isina waya pane Tsvaga X2 Pro kwaive kusuwa kukuru. Tinotarisira kuti bhatiri rive 4,500mAh cell.
Kutaura nezvezvinhu zvine chekuita nekuchaja, anowanzo leaker Dhijitari Chat Station vakaona iri pachena Tsvaga X3 Pro chitupa chinyorwa online. Rondedzero yacho inoratidza kuti foni inogona kunyatso kuvezwa ne65W wired kuchaja. Saka isu tinotarisira yakafanana nguva dzekuchaja seTsvaga X2 Pro.
Related: Iwo mafoni akanakisa asina waya yekuchaja kuti uwane izvozvi
Asi ko kamera? Runyerekupe runoratidza kuti Oppo Tsvaga X3 Pro inogona kusanganisira maviri 50MP Sony-akagadzira maseru eakajairwa uye e-Ultra-wide shots. Pamusoro peizvozvo, panogona kuve ne13MP telephoto lens. Isu tinotenda kuti panogona zvakare kuve ne3MP "microscope" macro kamera. Izvi zvinogona kunge iri diki sensor muzasi kuruboshwe kwemo module mumufananidzo uri pamusoro. Iyo lenzi yaigona kubatsira nekuvhara-kumusoro kwemaruva uye nezvimwe zvakaoma-kupfura zvinhu.
Kudzoka munaNovember, Oppo akasimbisa kuti iyo Tsvaga X3 nhepfenyuro inoratidzira nyowani "izere-nzira-nzira yemavara manejimendi system." Izvi zvinoreva kuti chiratidziro chingave chakanyatsojeka kana zvasvika pamavara. Ehezve, isu tichafanira kuyedza izvi isu pachedu.
Chekupedzisira, isu tinogona chaizvo kuvimbisa kuti foni ichavhura nayo Android 11 wabviswa ganda ne Ruvara OS 11.
Zvimwe Tsvaga mafoni eX3
Sezvambotaurwa, hatitarisiri kuti kuve nevanilla Tsvaga X3 padivi peOppo Tsvaga X3 Pro. Nekudaro, isu tinotarisira kuti pachave nemamwe majaira maviri mumhuri: Tsvaga X3 Neo uye Tsvaga X3 Lite.
Iyo Tsvaga X3 Lite inofanira kuve inozivikanwa kwazvo. Tinotarisira kuti chishandiso ichi chive nyore rebrand yeOppo Reno 5. Sezvo iyo Reno 5 uye iyo Tsvaga X3 Lite yaizomhara mumisika dzakasiyana, vatengi vazhinji vanongova nesarudzo imwe chete, saka havangazive chero zvakasiyana. Zvimwe kunze kwechiratidzo chekumashure, nhare dzinofanirwa kufanana. Izvi zvinoreva a Snapdragon 765G pasi pehood, 6.4-inch kuratidzwa, 65W wired kuchaja, uye quad-kamera array kumashure.
Saizvozvo, iyo Tsvaga X3 Neo inotaridzika kuve yakadzorerwa Oppo Reno 5 Pro Plus. Kana izvo zvikapedzisira zvave zvakadaro, tinogona kutarisira Snapdragon 865 chipset pasi pechiratidziro chakakombama che6.5-inch. Iine ayo anotyisa maspec uye kuwanda kwemashure kamera, iyo Tsvaga X3 Neo aizove ari wepakati mwana pakati pebhajeti-inoshamwaridzika Lite uye chikwama-chinotyisa Oppo Tsvaga X3 Pro.
Iwe unogona kutsvaga zvimwe nezve iyo Reno 5 akateedzana pano.
Oppo Tsvaga X3 dzakateedzana: Mutengo uye kuwanikwa
Isu takada zvese nezve Oppo Tsvaga X2 Pro - kunze kwemutengo wayo. At £ 1,099 (~ $ 1,500), iyo foni yainyanya kudhura segore rapfuura Samsung Galaxy S20 Ultra. Ichokwadi, ine yakakwira-caliber specs uye inotyisa dhizaini yekushongedza, mutengo wacho waive usina musoro zvachose. Zvaingova zvakawanda.
Onawo: 2021 inogona kunge iri gore mitengo yeApplephone inozopedzisira yachengetedzwa
Gore rino, isu tanga tichivimba kuti Oppo angadaro tevedza Samsung inotungamira uye kuunza mutengo zvishoma kune Oppo Tsvaga X3 Pro. Nekutenda, zvinoita sekunge izvo zvaigona kuitika kana chete nediki diki. Zvinoenderana neruzivo rwakawanikwa na 91Mobiles, aya anogona kunge ari mitengo yemakero eiyo Tsvaga X3 akateedzana:
Oppo Tsvaga X3 Lite - € 400 - € 500 (~ $ 486 - $ 607)
Tsvaga X3 Neo - € 700 - € 800 (~ $ 850 - $ 971)
Tsvaga X3 Pro - € 1,000 - € 1,200 (~ $ 1,214 - $ 1,457)
Kana iyo mitengo ikabuda kunze, kunyangwe fungidziro yepamusoro ingangodaro ichidhura pane zita regore rapfuura Tsvaga X2 Pro. Pachinhu chidiki, unogona kuzorora zviri nyore uchiziva kuti mikana yacho yakanaka hapazove nemutengo unowedzera gore rino.
Kusvika pakuwanikwa kunowanikwa, unogona kutarisira kuti Tsvaga X3 nhepfenyuro inogara munyika dzakafanana segore rapfuura. Izvi zvinoreva kuti vazhinji veEurope neUnited Kingdom. Hazvifungikire Oppo kuti atange chero mafoni ekutsvaga X3 muUnited States. Iine iyo Reno 5 akateedzana anowanikwa muIndia, zvakare hazvifungire kuti Tsvaga X3 akateedzana anogara ikoko.
Ndo zvese zvatinoziva kusvika parizvino nezve Oppo Tsvaga X3 Pro! Ive neshuwa yekumaka peji iri sezvo richizoona zvinogara zvichigadziriswa kubva ikozvino kusvika kuvhurwa.
Oppo Tsvaga X kuongororwa: Kusanganiswa kunoshamisa kunoshamisa uye kusingabatsiri